युवतीको ग’म्भीर आ’रोप पछि नायक किशोर खतिवडा युवतीसंगै आए मिडियामा, दुवै एक साथ बसेर मिडिया सामु दिए यस्तो स्पस्टिकरण ! हे’र्नुहोस (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
April 17, 2021 AdminLeaveaComment on युवतीको ग’म्भीर आ’रोप पछि नायक किशोर खतिवडा युवतीसंगै आए मिडियामा, दुवै एक साथ बसेर मिडिया सामु दिए यस्तो स्पस्टिकरण ! हे’र्नुहोस (भिडियो सहित)
खतिवडाले त्यस्तो आरोप लगाएपछि ति दुवै अहिले एकै साथ मिडियामा आएका छन । उनीहरुको सम्बन्ध बारे सामाजिक संजाल तातीए पछि उनीहरुले आ-आफ्नो स्पष्टिकरण दिन क्यामेरा सामु उपस्थित भएका हुन । भिडियो यहाबाट हेर्नुहोसः